Axmed Deedat - Wikipedia
Axmed Deedat waxa uu dhashay 1 juun 1918 waxa uu dhintay 8 ogost 2005 shiikh deedaat waxa uu ahaa daaci islaamiya waxa uu kucaanbaxay doodaha iyo qoraaladiisii uu isku barbar dhigi jiray diinta islsaamka iyo diinta kiristaanka.
Taariikh Nololeedkiisii[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxa uu ku dhashay shiikh deedaat Magaalada Dashkinar gobalka suwaarat ee wadanka india. Isla markii uu dhashayba aabihii waxa uu u safray xagaas iyo konfur afrika.aabihii waxa uu ahaa dawaarle amba harqaanle. Kadib axmed waxa uu aabihii kadaba tagay. Sanadii 1927 kadib markii ay waxbarashadii hindiya aad ugu adkaatay.waxa ay hooyadii dhimatay kadib.markii uu aaday xagaas iyo konfur afrika. Kadib axmed diidaa oo aad uyara wxa sowajahay. Duruufo aad u dag lakiin dada oo aad fariid u haaa waxa uu ku dadaalay sidii uu u baranlahaa ingiriisiga.
Bilawgii dacwadiisa[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Markii ay gaadhay dadiisu 16. Jir ayuu axmed bilaabay shaqadiisii ugu horaysay waxa uu kabilaabay. Goob ganacsi kadib waxa uu kasheqeeyay goobo ganacsi oo aad ubadan. Kadib axmed didaat waxa uu kasheqeeyay goobshaqo oo uu lahaa ganacsade muslim ahi. Goobtaas oo ay kudhaway meel lagu barto diinta kiristanka waxa ay ahyd xeebta naatasha waqooyi ee konfur Afrika kadib machadkii. Waxa kabilaamay dhibaatooyin iyo dhalaycayno loosoo jeediyay islaamaka. Taasi waxa ay ku beegnayd kadib markii uu shiikh axmed helay kitaab uu qoray shiikh hindiya oo la odhanjiray.
Kitaabkaas ayaa axmed diidaat u fududeeyay in uu waajoho shubuhaadkii ay ku hadlaayeen nasaaradii uu u dhawaa. Shii dadeet waxa uu bilaabay in uu isag dhigo kitaaba quraanka ah kitaabka kiristanka ee kitaabul muqadaska. Kadib taas axmed waxa uu bilaabay in uu sameeyo doodo doodahaas oo ay ku muslimiin kumanaan nasaara ahi ialaahay, shiikh didaat waxa uu geeriyooday 2005.
Qaar kamida maxaadarooyinkii uu kaqaybgalay[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Sheeq axmed deedaat waxa uu ka qaybgalay maxaadarooyin aad u badan kuwaas oo uu badankooda kula doodijiriay raga ugu sareeya diinta masiixiyada ragaasina waxa ay u badnaayeen maraykan.
Eaxaa ka midhaa kulamidii uu ka qayb galay sanadii 1983 kulan ay ku kulmeen isga iyo laba nin oo maraykan ah kulankaas oo kadhacay magaalada derben ee wadanka koonfur afrika.
Waxa kale oo uu ka qayb galay isla sanadkaa isla magaaldaa kulan kadhacay oo lagaga doodayay nabi ciise iyo quraanka sida uu uga waramay. (Masiixiyiinta runta ah rumaysta: Ilaahay waa mid. Mid la mid ahna ma jiro. Ciise waa nebigii Ilaah, ma ahan Ilaaha Qaadirka ah. Ilaahay wuu mamnuucay sanam caabudid. Binuʼaadanku waxay arki doonaan maalin la xisaabin doono. Kuwii dhintay in la tirin karin baa Jannada lugu soo nooleyn doonaa. Ilaahay doonistiisa waa binu'aadanku inay weligood dunida ku noolaadaan.)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Axmed_Deedat&oldid=221633"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Oktoobar 2021, marka ee eheed 18:50.